तीन कम्पनीका काेराेनाविरुद्धका खोप नेपालमा परीक्षण हुँदै — Raranews.com
रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/५/८ गते
काठमाडौँ, भदौ ७ गते । खोप विकासमा सबैभन्दा अगाडि रहेको विश्वका तीन खोप उत्पादक कम्पनीले नेपालमा तेस्रो चरणको खोप परीक्षणको प्रकृया अगाडि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परीक्षणको प्रकृया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो, “हङ सीले चिनियाँ कम्पनीमा कार्यरत एक हजार जनामा खोप लगाउने प्रस्ताव गरेको छ, उसको प्रस्तावमा सम्भाव्यता र स्वास्थ्य प्रोटोकलबारे परिषद्ले अध्ययन गरिरहेको छ ।”
तेस्रो चरणको परीक्षण नहुँदै गेमेलियाको उत्पादन स्पुतनिक भीको ठूलो मात्रामा उत्पादन समेत सुरु भइसकेको छ । चीन, बेलायत र रुसी तीनै खोप निर्माता कम्पनीले नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षणको लागि तयार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवाली खोप विकास र परीक्षणबारे सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यद्यपि खोप खरिदसम्बन्धी प्रकृया बारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छैन । खोप सुरक्षित गर्न विभिन्न तीनवटा प्रकृया रहेको छ । खोप खरिद गर्न चाहने राष्ट्रले उत्पादक कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्न सक्नेछ । अर्को विश्व स्वास्थ्य संगठनले न्यून आय भएका राष्ट्रका लागि खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्छ ।
तेस्रो, विश्व स्वास्थ्य संगठन र यूनिसेफकै अनुदानमा सञ्चालित गाभीले उत्पादक कम्पनीसँगको सहकार्यमा सबै राष्ट्रमा खोपको सामान अधिकार र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्छ ।
गाभीले सन् २०२१ को सुरुवातमै न्यून र मध्यम आय भएका राष्ट्रमा दश करोड खोप वितरण गर्ने जनाइसकेको छ । यस्ता मध्यम र न्यून आय भएका राष्ट्रको संख्या ९२ छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट
कर्णाली प्रदेश एक महिनादेखि प्रमुख सचिवविहीन,सिंहदरबारमा तीन सचिवले पाएनन् जिम्मेवारी
४७ जिल्लामा निषेधाज्ञा